Puntland Oo Soo saartey digniin ku socota DFS - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Puntland Oo Soo saartey digniin ku socota DFS
February 13, 2020 9:52 AM - Written by Warbaahinta AlloolNews BO
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Puntland Cali Xasan Axmed (Sabareey) ayaa sheegay in faragelinta dhinaca Maamulka ah oo ay ku heyso Dowladda Federaalka Puntland ay bilihii u dambeeysay aad isku soo tareysay taasina ay keeni karto in nidaamka dalka kajiro uu ka baxo.
Waxaa uu sheegay in puntland ay dhowr jeer isku dayday inay wada-hadal la gasho dowladda Federaalka si loo dhameeyo mad madowga siyaasadeed,balse taasi ay ku guul dareysatay dowladda Soomaaliya.
“Hadii aan la tixgelin dastuurka dalka dhibaato kale ayaa imaan karta dalka,waxaana ugu baaqayaa madaxda sare ee dalka inay faragelinta ka daayaan Maamulka Puntland ayuu yiri”Wasiirka.
Marka laga soo tago hadalka Wasiirka Warfaafinta Puntland ayaa Wareysi uu bixiyey Madaxweynaha Soomaaliya uu ku sheegay in Madaxweynaha Puntland uu dhowr mar wada-hadallo ugu yeeray balse uu fulin waayay.